ဆယ်ကျော်သက်များအနက်အပြန်အလှန်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း - နှစ်ဖက်စလုံးမိဘနှင့်ကလေးဆက်ဆံရေး (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောကလေး Psychol ။ 2010 ဇန်နဝါရီလ; 38(1): 77-89 ။
2009 စက်တင်ဘာလ2အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1007/s10802-009-9347-8
Regina JJM ဗန်တွင်း Eijnden, 1,2 Renske Spijkerman,3 ကြော်ငြာအေ Vermulst,3 တိုနီဂျေဗန် Rooij,2 နှင့် Rutgers CME အိန်ဂျယ်3
မိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတွေ့ကြုံခံစားသော်လည်း, နည်းနည်းမိဘများ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (CIU) ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသူတို့သားသမီးကာကွယ်တားဆီးဖို့ကစားနိုင်ပါတယ်အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားအသင်းအဖွဲ့များအဖြစ်ကဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ bidirectionality အမှာစကားပြောကြား။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည်: cross-section လေ့လာမှု 4,483 ဒတျချြကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာများနှင့် 510 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်တစ် Self-ရွေးချယ်ထားသည့်နမူနာသုံးပြီး longitudinal လေ့လာမှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ရလဒ်များအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သှေးကောငျးမှဆက်သွယ်ရေးမိဘများ CIU ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကာကွယ်တားဆီးဖို့အတှကျအလားအလာ tool ကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အပြင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ content နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မိဘ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှမိဘတုံ့ပြန်မှု CIU တားဆီးကိုကူညီလိမ့်မည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့် ပတ်သက်. တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများ, သို့သော်, compulsive သဘောထားတွေကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ CIU အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းခန့်မှန်းသိရပါအံ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဦးတည်းဆန့်ကျင်ဘက် link ကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်။
keywords: အင်တာနက်, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, မိဘတို့, compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှု, အင်တာနက်စွဲလမ်း
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိမြီးကောင်ပေါက်များကြားလူကြိုက်အများဆုံးအပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်းရှိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ပတ်ကို ၁၁ ဟက်တာနှုန်းဖြင့်အင်တာနက် အသုံးပြု၍ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်လူငယ်များအကြားတစ်ပတ်ကို ၉ နာရီမှ ၁၅ နှစ်ကြား ၁၅ နှစ်ကြားတစ်ပတ်ကို ၁၅ နာရီအထိရှိသည်။ ထို့အပြင်အသက် ၁၄ နှစ်နှင့်အထက်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်တီဗွီကြည့်ခြင်းထက်ပျော်စရာအချိန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဟုမှတ်ယူကြသည် (Van Rooij နှင့် Van den Eijnden) 2007).
အင်တာနက်များ၏မြင့်တက်လူကြိုက်များနှင့်အချိန်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်ငွေပမာဏအွန်လိုင်းသုံးဖြုန်းအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (Greenfield ကနေသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုသူမိဘများစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာ 2004; Subrahmanyam et al ။ 2000; ဝမ် et al ။ 2005) ။ မိဘများ Sothern (မိမိတို့၏သားသမီးရဲ့အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများ၏တဦးတည်း-ဘက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေနေနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်းအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များအကြောင်းကို 2004) ။ ထိုမှတပါး, မိဘများတစ်ခါတစ်ရံမိမိတို့၏ကလေးများဖြစ်လာကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူရင်ဆိုင်နေကြသည်ဒါကြောင့်သူတို့မရှိတော့သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းအင်တာနက်ပူးတွဲ။ စာပေ၏ကြီးထွားလာသောခန္ဓာကိုယ်, ထိုအလားတူရိုးရာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေဖို့စိတ်ကူးထောက်ပံ့နေသည်ဤကိစ်စတှငျ, ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်လူကြီးများမကြာခဏထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအရှုံးဖြင့်လိုက်ပါသွား, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနဲ့အဆက်မပြတ်အင်တာနက်သုံးစွဲဖို့တစ်ခုမထိန်းချုပ်တတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ, နှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များ (လူငယ်ကြားမှအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက် 1998, 2004) ။ စွဲလမ်းပေါ်တွင်အစဉ်အလာအမြင်ကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအွန်လိုင်းအပြုအမူဒီလိုမျိုး၏ရှုထောင့် (ဥပမာအဘယ်သူမျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်) ရှိပါတယ်သော်လည်းအင်တာနက်စွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ် compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (CIU) ကြှနျုပျတို့ကြောင့်ဖုန်းဆက်ဖို့ပိုနှစ်သက်ကြောင်းစောဒကတက်နိုင်ပါတယ် , ယား (အ DSM-IV စံနှင့်အညီပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့အများကြီးတူညီရှိပါတယ် 1995; Mitchell က 2000; Shapira et al ။ 2003).
အများအပြားကဝိသေသလက္ခဏာများအင်တာနက်အလွန်အမင်းထိုကဲ့သို့သောလွယ်ကူသောရရှိနိုင်မှု, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်နှင့်အမည်ဝှက် (Greenfield အဖြစ်ဆွဲဆောင်စေ 1999) ။ အထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်လျှင်မြန်စွာတစ်ခုပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုဆုလာဘ်အောင်မြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးအရချိတ်ဆက်နှင့်လက်ခံခဲ့သည် Feeling အင်တာနက်များ၏ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများအထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုမှုကိုလုပ်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်၏မြင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်မှာတော့ဒီ feature Cooper က (ထိုအပြုအမူအတွက်ဇွဲနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် 1998; Orford 2001; လူငယ်တို့ et al ။ 1999).
မြီးကောင်ပေါက် CIU များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ မကြာသေးမီကဒတျချြလေ့လာမှုအများဆုံးကိုအခြားအင်တာနက် applications များ (ဗန်တွင်း Eijnden et al ထက်ပိုမိုမြင့်မားစွဲလမ်းအလားအလာထိုကဲ့သို့သော instant messaging ကဲ့သို့သောကြောင်းချက်ချင်းအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး applications များပြသခြင်းနှင့်ဝက်ဝံ chatting သိရသည်။ 2008) ။ instant messenger ကိုအသုံးပြုမှုတကယ်တော့မြီးကောင်ပေါက် (စုစုပေါင်းအသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံးအင်တာနက် function ကိုဖြစ်ပါတယ် 2004; ဗန်တွင်း Eijnden et al ။ 2008) ။ ထို့အပြင်တိုကျရိုကျ cortical နှင့် subcortical monoaminergic ဦးနှောက်စနစ်များ၏ကျက်ကာဇီ et al (ကသငြ်ကူးေူပာင်းမြရိုအပြုအမူအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက် Impulse အခြေခံမှတွေးဆသည်။ 2008) ။ တဖကျတှငျ, ဒီ neurodevelopmental လုပ်ငန်းစဉ်သင်ယူမှု drive ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ဟန်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေတစ်ခုတိုးလာအားနည်းချက်မှကုန်သည်များ et al ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ 2003) ။ ဒါဟာတိုးမြှင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော CIU ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်မှာပိုပြီးလူငယ်ထားရသောလက်ငင်းအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး, အဖြစ်အလွန်အမင်းစွဲလမ်းအလားအလာနှင့်အတူအင်တာနက် applications များ၏သက်သက်လူကြိုက်များ၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမများသဘောတူညီမှုအင်တာနက်စွဲလမ်းများအတွက်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်နှင့်တိုင်းတာခြင်းတူရိယာအပေါ်တည်ရှိပေမယ့်အများအပြားလေ့လာမှုများတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ (Nichols နှင့် Nicki ကြားတွင်ထက်နည်း 1% မှာဒီအတော်လေးသစ်ကိုဖြစ်ရပ်ဆန်းများပျံ့နှံ့အပေါ်ဒေတာသတင်းပို့ 2004) နှင့်နော်ဝေ (Johansson နှင့် Gotestam တစ် 2-to-12 နှစ်အရွယ်ကိုယ်စားလှယ်နမူနာကြားတွင်နီးပါး 18% 2004) နှင့်ဖင်လန်လူငယ် (Kaltiala-Heino et al ။ 2004) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နမူနာအကြားလတ်တလောဒတျချြလေ့လာမှုအသက် 11-15 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်များ၏အကြောင်းကို 3.8% CIU ၏လေးနက်သောရောဂါလက္ခဏာ (ဗန် Rooij နှင့်ဗန်တွင်း Eijnden တီထွင်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ 2007) ။ ဤလေ့လာမှု၌, CIU ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်သို့မဟုတ်ခုတ်လှဲရန်အလိုဆန္ဒရှိနေသော်လည်းယင်းသို့အင်တာနက်အသုံးပြုမှု (1) ဆက်လက်အဖြစ်စံနေဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့သည်; အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ (2) မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုကြုံနေရ; (3) အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုထံမှမှလွတ်မြောက်ရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး; တဦးတည်းရဲ့မှတ်ဥာဏ်နဲ့အပြုအမူလွှမ်းမိုး (4) အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို; အခြားသူများနှင့်သို့မဟုတ် Self-ပဋိပက္ခ (Meerkerk et al ပဋိပက္ခများအတွင်းရရှိလာတဲ့နှင့် (5) အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း။ 2009).
မိဘများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏သုခချမ်းသာအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ (ထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုမှုအဖြစ်ဥပမာ Harakeh et al ပြဿနာအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။ 2004; ဗန် der Vorst et al ။ 2005) ။ မိဘများအရေးကြီးသောနှင့်သြဇာအေးဂျင့်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ၎င်းတို့၏မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အင်တာနက်-related ပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားဆီးနိုငျသညျ။
အများအပြားကလေ့လာမှုများမိသားစုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကြားလင့်များအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ဥပမာ, မိဘကလေးကြားဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးအဆိုးကျောင်းသားများကို (လျူနှင့် Kuo ကအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်း၏အဆင့်ကိုသူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် 2007), နှင့်မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ပဋိပက္ခ (ယန်း et al ။ 2007) နှင့် (Ko et al functioning မိသားစုနှင့်အတူနိမ့်ကျေနပ်မှု။ 2007; ယန်း et al ။ 2007) ဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှအပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများအမှန်တကယ်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့်သားသမီးရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြား link ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။ ဤကိစ်စတှငျသာထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် website ကိုကန့်သတ် setting အဖြစ်တင်းကျပ်မိဘနည်းစနစ်သားသမီးရဲ့အမှန်တကယ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (Lee နဲ့ Chae နှင့်ဆက်စပ်သောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, 222 မှ 10 အသက် 12 ကလေးများကြားတွင်အကြောင်းကိုတဦးတည်းစစ်တမ်းကိုသိရ 2007) ။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်ရှိမရှိ CIU များ၏အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်သွယ်မှုအမှာစကားပြောကြား။ ကြိုတင်သုတေသနပြုမိဘအုပ်ချုပ်မှုကိုဘက်တော်သားနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှမိဘတုံ့ပြန်မှု (Luthar နှင့်စတိန်း၏အရေးပါမှုကိုအချို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်ကတည်းက 2008; Otten et al ။ 2007a; ဗန် der Vorst et al ။ 2006) ကြှနျုပျတို့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ကြောင့်မိဘအုပ်ချုပ်မှုကိုဘက်တော်သား hypothesize နှင့်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှမိဘတုံ့ပြန်မှုအဆိုး CIU နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ်မြီးကောင်ပေါက် '' အင်တာနက်အလေ့အကျင့်ကိုအတွက်မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ (Ennett et al အရက်သေစာအသုံးပြုမှုတားဆီးအတွက်မိဘ၏ဆက်သွယ်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ 2001; မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ 1999; ဗန် der Vorst et al ။ 2005), နှင့်ဆေးလိပ်သောက် (Harakeh et al ။ 2005; Otten et al ။ 2007a) ။ မမျှော်လင့်ဘဲဤလေ့လာမှုအချို့ဗန်တွင်း Eijnden et al (အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်အကြောင်းကိုမိဘဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' အမှန်တကယ်အပြုအမူအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2008; ဗန် der Vorst et al ။ 2006), အခြားသူများကိုအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့များ (Ennett et al တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း။ 2001; မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ 1999) ။ ဤရလဒ်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မကြာခဏမိဘဆက်သွယ်ရေးမြီးကောင်ပေါက် '' အမှန်တကယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအပြုအမူကိုတိုးမြှင့်စေမည်အကြောင်းဆိုလို။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤတွေ့ရှိချက်လည်းမြီးကောင်ပေါက် '' ဥစ္စာအသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းတိုးပွါးပေးသောဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမ်းကြောင်းကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိသုတေသနစမ်းသပ်အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားအသင်းအဖွဲ့များ, ဒါပေမယ့်လည်းတွေ့ရှိခဲ့အသင်းအဖွဲ့များ၏ bidirectionality မသာမည်။
မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းထက်ပိုသောမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြနောက်ဆုံးအနေနဲ့, မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးတွေဖြစ်တဲ့ (Harakeh et al ဆေးလိပ်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက် '' အန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုတားဆီးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ 2005) နှင့်အရက် (ဗန်တွင်း Eijnden et al ကိုအသုံးပြုပါ။ 2009) ။ ထို့ကြောင့်, ဆယ်ကျော်သက် '' အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဖြစ်ကောင်းစွာလေ့လာခဲ့လိမ့်မည်။
1 ၏နမူနာကို အသုံးပြု. 4,483-11 နှင့် 15 အသက်2ဒတျချြကျောင်းသားတစ်ဦးကြီးများနမူနာသုံးပြီး 510) cross-section လေ့လာမှု) တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှု: အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အကြားအသင်းအဖွဲ့များနှင့် CIU မြီးကောင်ပေါက်အကြားနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ, အမည်ရအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည် 13-15 အသက်ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်အယူအဆမိဘဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းအပြုသဘော CIU နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းမိဘ၏စည်းမျဉ်းပြဋ္ဌာန်းခြင်း, အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှမိဘတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သှေးကောင်းသောမိဘဆက်သွယ်ရေး, CIU အဆိုးဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ bidirectionality လေ့လာမှု2၏ longitudinal data တွေကိုသုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
လေ့လာမှု 1 များအတွက်အချက်အလက်များကိုစွဲသုတေသနအင်စတီကျု, ရိုတာဒမ်အားဖြင့်ကောက်ယူသည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလေ့လာမှု '' အင်တာနက်နှင့်လူငယ် '' ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းတာခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းနေကြသည်။ ဒေတာကို 15 မူလတန်းကျောင်းများနှင့် (202 စာသင်ခန်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းနှင့်အတူ) ကိုးအလယ်တန်းကျောင်းများအကြားစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့ 11 မှ 15 အသက်ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်များ၏ကိုယ်စားလှယ်နမူနာရရှိရန်ရည်ရွယ်။ ကျောင်းများ၏ရွေးချယ်ရေးမဟုတ်သောအနောက်ကျောင်းအဆင့် (အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ် Pre-တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးသာရှိပြီးပြည်ပမှသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း), နယ်သာလန်အတွက်ဒေသ (မြောက်, အရှေ့, တောင်ဖက်, မြို့ပြအနောက်ဘက်နှငျ့ ပတျသကျ. ဒတျချြကျောင်းများ၏ဖြန့်ဖြူးအကြောင်းကိုကိုယ်စားလှယ်ဒေတာ, အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် မြို့ပြ) နှင့်မြို့ပြမှုနှုန်း) = 'အလွန်အမင်းမြို့ပြ' '1 (ရန် (5 =' Non-မြို့ပြ ''www.cbs.nl) ။ အဆိုပါပါဝင်ကျောင်းများအားလုံးအတန်းကဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသောကြောင့်, နောက်ဆုံးနမူနာဖြန့်ဖြူးလိင်, ကျောင်းအဆင့်, ဒေသ, မြို့ပြမှုနှုန်းနှင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံနှင့် ပတ်သက်. လူဦးရေဖြန့်ဖြူးရန်အလွန်ဆင်တူခဲ့သည်။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ 23% အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုပိုင်သော်လည်းဤအချက်သရုပျဖျောရနျကြှနျုပျတို့၏နမူနာ, တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများကနေ 22% မြီးကောင်ပေါက်ပါဝင်သည်။
ဒေတာစုဆောင်းခြင်းမတိုင်မီကအားလုံးကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့်ဆရာ, ဆရာမခွင့်ပြုချက်ချထားပေးသည်။ မိဘများ၏ခွင့်ပြုချက် passive အသိပေးသဘောတူညီခကျြဖွငျ့ကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။ ပိုများသောအထူးသ, မိဘများတို့သည်မိမိတို့ကလေး၏ကျောင်းကအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်သုခချမ်းသာအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုမှာပါဝင်နှင့်မေးခွန်းလွှာကျောင်းချိန်အတွင်းမှာအုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်သောစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မိဘများဟာသူတို့ရဲ့ကလေး၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူသဘောမတူခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်သုတေသီများဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နိုင်ဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2006 ခုနှစ်, စာဖြင့်ရေးသားမေးခွန်းတစ်ဦးစာသင်ခန်း setting ကိုအတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာမေးခွန်းလွှာထုတ်ဖြည့်နေစဉ်သင်တန်းသားများကို '' privacy ကိုအာမခံဖို့လမ်းညွှန်ချက်အပါအဝင်စာသင်ခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောညွှန်ကြားချက်များ, လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဆရာများကိုလည်းဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းသားများကိုပြောပြရန်မေးမွနျးခဲ့သညျ။
ဤလေ့လာမှုတွင်စုစုပေါင်းကျောင်းသား ၄,၄၈၃ ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၅၁.၃% မှာယောက်ျားလေးများဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ၏အသက်သည် ၁၀ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ကြားရှိသည်။M = 13.1, SD က = 1.15) ။ သင်တန်းသားများကို၏, 10.6% 10.5% အဋ္ဌမတန်းများတွင်သတ္တမတန်းနှင့် 40.3% အတွက်, ပဉ်စမတနျးထဲမှာဆဋ္ဌမတန်းအတွက် 38.6% ရှိကြ၏။ ပဉ္စမနှင့်ဆဋ္ဌမအဆင့်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာရေးသေးသီးခြားအဆင့်ဆင့်သို့မတူညီမခံခဲ့ရပါဘူး။ သတ္တမနှင့်အဋ္ဌမတန်းများတွင်ကျောင်းသား, 34% အသက်မွေးမှုကျောင်းကအောက်ပါတို့ 49% (သင်တန်းသားများ၏ 17% များအတွက်ကျောင်းအဆင့်, ဤသုံးပါးကျောင်းတွင်အဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းဗားရှင်းခဲ့) အထက်တန်းကျောင်းတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး Pre-တက္ကသိုလ်အစီအစဉ်တွင်ခဲ့ကြသည် ။
လေ့လာမှု ၂ အတွက်အချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိနဖူးစည်းစာတန်းများဖြင့်ကောက်ယူသည်။ MSN လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ကိုအသုံးပြုသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်နဖူးစည်းစာတန်းရရှိပြီး ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်များကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ မကြာခဏနှင့်မကြာခဏဆိုသလိုအသုံးပြုသူများ၏ပါ ၀ င်မှုကိုသေချာစေရန်၊ ၆ ပတ်ကာလအတွင်းနဖူးစည်းစာတန်းများကိုတစ်ကြိမ်သာပြသခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာအပြီးတွင် ၆ လကြာပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်တိုင်းတာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဆန္ဒရှိပါကပါ ၀ င်သူများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒုတိယတိုင်းတာမှုတွင်လုပ်အားပေးရန်သဘောတူခဲ့သည့်ပထမဆုံးတိုင်းတာမှုပြုလုပ်သူများသည် ၆ လအကြာတွင်ဒုတိယအကြိမ်မေးခွန်းလွှာနှင့်လင့်ခ်ပါသောအီးမေးလ်တစ်စောင်ရရှိခဲ့သည်။
ပထမတိုင်းတာမှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်ပေါင်း ၁၆၄၇ ဦး ပါဝင်ပြီးဒုတိယတိုင်းတာမှုတွင် ၅၁၀ ပါဝင်သည် (တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် ၃၁%) ။ ပါဝင်သူ ၅၁၀ ဦး အနက် ၃၂.၂% သည်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများ၏အသက်သည် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိရှိသော်လည်း ၉၈.၄% မှာ ၁၃၊ ၁၄ သို့မဟုတ် ၁၅ နှစ်ဖြစ်သည်။M = 14.1, SD က = 0.80) ။ သင်တန်းသားများကို၏% အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးအောက်ပါခဲ့ကြသည် 28.5, 26.7% အထက်တန်းကျောင်း ရှိ. , 44.8% တစ်ဦး Pre-တက္ကသိုလ်အစီအစဉ်ကိုရှိကြ၏။
Drop-တနေရာနှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာပါဝင်ခဲ့ကြသောကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကွဲပြားရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့လိင်, အသက်အရွယ်, ပညာရေးအဆင့် CIU နှင့်ငါးအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာအတွက်ပါဝင်မှုခန့်မှန်းတဲ့ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သာပညာရေးအဆင့်သိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ပြသ (OR = 1.46, p < 0.001, 95 နှင့် 1.30 အကြား 1.64% CI), နှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာပါဝင်ခဲ့ကြသောကျောင်းသားများပထမဦးဆုံးတိုင်းတာခြင်းလိုက်ကျဆင်းခဲ့သောကျောင်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဆိုလိုသည်မှာအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ် Pre-တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးပညာရေး၏အမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုလိုကျနာဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားကွဲပြားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အလားတူအစီအမံလေ့လာရေး 1 နှင့်2အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှု အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (Meerkerk et al များအတွက်မကြာသေးမီကတီထွင်ခြင်းနှင့်အတည်ပြု compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) ၏တစ်အဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းနဲ့တိုင်းတာခဲ့သည်။ 2009) ။ ဒီဗားရှင်း (စဗန်တွင်း Eijnden et al တွေ့မြင် CIU ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ထုတ်သည့် 14 မူရင်းပစ္စည်းများကိုဆယ်ပါရှိသည်။ 2008) နှင့်အထူးသဥပမာကျောင်းစာ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအွန်လိုင်းသွားမြီးကောင်ပေါက်အကြား CIU addressing အခြားနှစ်ဦးကိုပစ္စည်းများ။ အဖွမြေား '' အလွန်မကြာခဏ ''5မှ 1 ကနေအထိတစ်ဦး 5-အမှတ်စကေး '' ဘယ်တော့မှမ '' အပေါ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ပစ္စည်းများအားလုံးအပေါ်ယုတ်ရမှတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အတောအတွင်းရမှတ် CIU ၏မြင့်မားသောအဆင့်ညွှန်ပြ။ Cronbach ရဲ့ alpha: အဆိုပါစကေးနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာမှုများ (လေ့လာမှု 1 အတွက်ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရပြသ = 0.85; လေ့လာမှု 2: Cronbach ရဲ့ alpha = T0.84 မှာ T1 နှင့် 0.87 မှာ 2) ။
အင်တာနက်တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့် ( "နောက်ဆက်တွဲကိုတွေ့မြင်ငါးခုအသစ်တီထွင်ကြေးခွံကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည် A") အတိုင်းအတာပစ္စည်းများသည်။ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲအချိန်နှင့် ပတ်သက်. စည်းကမ်းများ သုံးအနုတ်လက္ခဏာင်တစ်ဦး 5-ကို item စကေးနှင့်အတူတိုင်းတာနှစ်ခုအပြုသဘောပစ္စည်းများ (လေ့လာမှု 1 ခဲ့ကြသည်: Cronbach ရဲ့ alpha = 0.83; လေ့လာမှု 2: Cronbach ရဲ့ alpha = T0.71 မှာ T1 နှင့် 0.75 မှာ 2) ။ မြင့်မားသောရမှတ်အင်တာနက်သုံးစွဲအချိန်ကိုလေးစားခြင်းဖြင့်တင်းကြပ်သောမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုညွှန်ပြနိုင်အောင်အနုတ်လက္ခဏာပစ္စည်းများ recoded ခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. စည်းကမ်းများ သုံးအနုတ်လက္ခဏာပစ္စည်းများပါဝင်သည်ဟုတစ်စကေးနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ recoded ပစ္စည်းများအပေါ်ယုတ်ရမှတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီစကေးအပေါ်အမြင့်ရမှတ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ content ပေါ်ခိုင်မာတဲ့မိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုညွှန်ပြ။ Cronbach ရဲ့ alpha: အဆိုပါစကေးကောင်းသော-to-အလယ်အလတ်ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (လေ့လာမှု 1 ပြသ = 0.80; လေ့လာမှု 2: Cronbach ရဲ့ alpha = T0.76 မှာ T1 နှင့် 0.84 မှာ 2) ။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှတုံ့ပြန်မှု Cronbach ရဲ့ alpha: ခြောက်လပစ္စည်းများ, လေးအပြုသဘောနှစ်ယောက်အနှုတ်လက္ခဏာ (လေ့လာမှု 1 အပါအဝင်တစ်စကေးကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည် = 0.85; လေ့လာမှု 2: Cronbach ရဲ့ alpha = T0.89 မှာ T1 နှင့် 0.90 မှာ 2) ။ ဆိုးကျိုးပစ္စည်းများ recoding ပြီးနောက်တစ်အတောအတွင်းရမှတ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အတောအတွင်းရမှတ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှမိဘတုံ့ပြန်မှုမြင့်မားဆိုလို။ တစ်ဦးက 3-ကို item စကေးတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်း (လေ့လာမှု 1: Cronbach ရဲ့ alpha = 0.78; လေ့လာမှု 2: Cronbach ရဲ့ alpha = T0.76 မှာ T1 နှင့် 0.75 မှာ 2) ။ တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အတောအတွင်းရမှတ်မြီးကောင်ပေါက် '' အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းညွှန်ပြ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး 3-ကို item စကေးတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေး (လေ့လာမှု 1: Cronbach ရဲ့ alpha = 0.83; လေ့လာမှု 2: Cronbach ရဲ့ alpha = T0.82 မှာ T1 နှင့် 0.85 မှာ 2) ။ ဒီစကေးအပေါ်တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အတောအတွင်းရမှတ်အင်တာနက်အကြောင်းကိုမိဘဆက်သွယ်ရေး၏မြင့်မားရိပ်မိအရည်အသွေးကိုဖော်ပြကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကတစ်ဦးအပိုဆောင်းလေ့လာမှုမကြာသေးမီကယင်းကဲ့သို့ထောက်ခံမှု (Scholte et al အဖြစ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ယေဘုယျအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငါးအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအစီအမံ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတရားဝင်မှုသို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြစ်သည်။ 2003), အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှု (Kerr နှင့် Stattin 2000), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု (Glasgow et al ။ 1997), နှင့်မိဘကလေးပူးတွဲမှု (Armsden နှင့် Greenburg 1987) ။ သိသာထင်ရှားသော multivariate အသင်းအဖွဲ့များသည်ဤယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းအစီအမံများနှင့်အင်တာနက်ကို-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအစီအမံများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်သောဒီဂရီမှဤအသင်းအဖွဲ့များအတန်အသင့်မြင့်မားသော (အကြားကွဲပြားဖို့အနိမ့်ခဲ့ကြ β = 0.10 နှင့် β = 0.28) (ဗန် Rooij နှင့်ဗန်တွင်း Eijnden 2007) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းဆောက်လုပ်ရေးထိုကဲ့သို့သောထောက်ခံမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းဆောက်လုပ်ရေးကှာခွားနှင့်သောသူတို့သည်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာတိုင်းတာသော။ အကြံပြု
ပထမဦးဆုံးသုတေသနမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကျနော်တို့အချက်အလက်စာရင်းများအတွက် (လေ့လာရေး 1 နှင့် 2) နှင့်အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU များအတွက်ငါးညွှန်းကိန်းများအကြားတွက်ချက်ဆက်စပ်နှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဆော့ဝဲအထုပ် Mplus ဗားရှင်း 4.2 (Muthénနှင့်Muthénသုံးပြီးဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (SEM) ၏နည်းလမ်းဖြင့်အင်တာနက်မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့် CIU အကြား Cross-Section နှင့် longitudinal ဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ် 1998) ။ လွတ်လပ်သော variable တွေကို (ပုံမြင်သည်အတိုင်းတစ်ဦးကမော်ဒယ်မှီခို variable ကိုနှင့်ငါးအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အဖြစ် CIU အပါအဝင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ 1) ။ အသက်အရွယ်, ကျားမနှင့်ပညာရေးအဆင့်ကိုထိန်းချုပ် variable တွေကိုအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့် CIU အကြား cross-section ဆက်ဆံရေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SEM လေးမော်ဒယ်များ, လေ့လာ 1 (Cross-Section) နှင့်လေ့လာ2(နှစ်ခု Cross-Section နှင့်တဦးတည်း longitudinal) ၏နမူနာသုံးခု၏နမူနာဘို့တစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။ လေ့လာမှု 1 ၏ဖြေဆိုသူစာသင်ခန်းများနှင့်စာသင်ကျောင်းများအတွင်းအသိုက်နေကြသည်။ ဤအအချက်အလက်များ၏အလှနျမှီခိုဘို့ပြင်ပေးဖို့, ကျနော်တို့ parameters တွေကိုများ၏စံအမှားအယွင်းများ၏ဘက်မလိုက်ခန့်မှန်းချက်အရ (Mplus အတွက်ရှုပ်ထွေးတဲ့-TWOLEVEL လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ်လူသိများ) မှာဆုံးမပဲ့ပြင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်၏ရလဒ်များကိုထားချက်အရကျနော်တို့ကပေါင်းစပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့်ကန့်သတ် memory space ကိုမှအလုပ်မလုပ်ဘူးတွေ့ရှိခဲ့ SEM-လေ့လာဆန်းစစ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့သီးခြားစီကျောင်းများနှင့်စာသင်ခန်းများအတွက်ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရလဒ်များကို (De Leeuw et al နှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ 2008) ။ နှစ်ခု SEModels အကြားခြားနားချက်များမှုမရှိခြင်းကိုခဲ့ကြသည်။ စာသင်ခန်းများအတွက်စာသင်ကျောင်းနှင့် 0.01 နှင့် 0.11 အကြား 0.01 နှင့် 0.13 အကြားကွဲပြားမော်ဒယ်အတွက်မှီခို variable တွေကိုများအတွက် Intraclass ညမညသဘောတရားမြှောက်ဖော်ကိန်း (ICC က) ။
ခြောက်နိုင်ငံငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုလုံလောက်စွာ 4,483 ဖြေဆိုသူ (လေ့လာမှု 1) ၏ပထမဦးဆုံးနမူနာ၎င်းတို့၏မူရင်းပစ္စည်းများဖြင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လေ့လာမှု2၏နမူနာ 510 ဖြေဆိုသူပါဝင်သည်နှင့်ဤနမူနာထိုသို့နမူနာအရွယ်အစားအဘို့လည်းမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခြင်းကနေခန့်မှန်းခြေ parameters တွေကို၏နံပါတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သည်ငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုအဘို့အညွှန်းကိန်းအဖြစ်ချောထုပ်သုံးစွဲဖို့ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှု 1 နှင့်လေ့လာ2အကြားတွေ့ရှိချက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်မှကြှနျုပျတို့လညျးလေ့လာ 1 ၏နမူနာအဘို့အချောထုပ်သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကအထုပ်ပေါင်းလဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ် variable ကို၏ပစ္စည်းများအနက်အချို့သာလျှင်၏ဆိုလိုသည်။ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲအချိန်နှင့်စပ်လျဉ်းစည်းကမ်းများနှစ်ခုချောထုပ်, နှစ်ပစ္စည်းများနှင့်တဦးတည်းအပိုဆောင်း item ကိုပါဝင်သည်ဟုဦးချင်းစီအားဖြင့်တိုင်းတာကြသည် ဟူ. ၎င်း, သုံးချောထုပ်, နှစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သောအသီးအသီးအားဖြင့်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှမိဘတုံ့ပြန်မှု; သုံးယောက် 4-item ကိုချောထုပ်များက CIU ။ ချောထုပ်ကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်တော်ကို item အချက်ဝန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းညီမျှလမ်းထဲမှာငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုထင်ဟပ်ချောထုပ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းတာများအတွက် 1-Factor ဖြေရှင်းချက်များ၏အချက်တစ်ချက်ကို load ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့ကြသည်နှင့်ပစ္စည်းများကိုယင်းအချက်ဝန်၏ပြင်းအားသည်နှင့်အညီချောထုပ်ဖို့ခွဲဝေပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကှကျ (စ Huver et al တွေ့မြင်မူရင်းအချက်ဖွဲ့စည်းပုံထင်ဟပ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်အချက်တစ်ချက် Load နှင့်အတူပစ္စည်းများပါရှိသည်။ 2007) ။ အင်တာနက်တွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်ညွှန်ကိန်းသုံးခုကိုသုံးပြီး၊ အဆိုပါပစ္စည်းအမြင့်ဆုံးအချက်တင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ longitudinal လေ့လာမှုအတွက်တူညီသောငုပ်လျှိုးနေသည့် variable များကိုရရန်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုအချိန်နှင့်အမျှအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငုပ်လျှိုးနေသော variable တစ်ခုစီအတွက်ညွှန်းကိန်းသုံးခု (သုံးခုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းသုံးခု) ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ နည်းသောညွှန်းကိန်းများသည်မလိုလားအပ်သောရလဒ်များဖြစ်သည့် factor loadings> 1 ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအနှုတ်မှားယွင်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နောက်ဆုံး SEM လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း, တိုင်းတာခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမတိုင်မီကအဆိုပါအချက်မော်ဒယ်ဆိုလိုသည်မှာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အားလုံးသုံး Cross-Section အချက်မော်ဒယ်များ CFI နှငျ့ကောငျးသောမထိုက်မတန်ပြသ > 0.97 နှင့် RMSEA < 0.05 ။ သုံးယောက်မော်ဒယ်များများအတွက်အချက် Loading အဆိုပါညွှန်ကိန်းများဟာသူတို့ရဲ့ငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုကောင်းတစ်ခုကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ, 0.54 နှင့် 0.92 အကြားကွဲပြား။ ပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများ၏ရာခိုင်နှုန်းလေ့လာမှု 0.05 ၏နမူနာအတွက် 3.2% နှင့် 1% အကြားကွဲပြား။ ဒေတာအားလုံးကိုရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက်အသုံးချမှကျနော်တို့အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကို (FIML) ခနျ့မှနျးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမပျောက်ဆုံးတန်ဖိုးများရှိကြ၏ဘာလို့လဲဆိုတော့လေ့လာ2ငါတို့သည် ML ခနျ့မှနျးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အတော်ကြာစာရေးဆရာများအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုမထိုက်မတန်အတိုင်းအတာနှင့်အတူမော်ဒယ်မထိုက်မတန်အစီရင်ခံ: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် (က) ကို Root ပေမဲ့ရင်ပြင်အမှား (RMSEA) (Byrne 1998) နှင့် Bentler (နားမှာ et al ၏ (ခ) ကိုနှိုင်းယှဉ်နဲ့ Fit ညွှန်းကိန်း (CFI) ။ 1988) ။ RMSEA ပိုကောင်းထက်နိမ့်သို့မဟုတ် 0.05 ညီမျှတန်ဖိုးများနှင့်အတူအနီးစပ်ဆုံးမထိုက်မတန်အကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့် 0.05 နှင့် 0.08 အကြားတန်ဖိုးများကိုတရားမျှတစွာမထိုက်မတန် (Kaplan ၏ညွှန်ပြနေကြသည်ဖြစ်ပါတယ် 2000) ။ CFI တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းဖြစ်၏ 0.95 အထက်တွင်တန်ဖိုးများ (Kaplan ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် 2000) ဒါပေမယ့် 0.90 (Kline ထက်နိမ့်မဖြစ်သင့် 1998).
ဒုတိယသုတေသနမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကျနော်တို့လေ့လာ2၏ longitudinal ဒေတာကိုသုံးခြင်းနှင့် SEM အသုံးပြု. Cross-ကြံ့လမ်းကြောင်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ cross-ကြံ့ panel ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (Finkel 1995T1 မှာ CIU နှင့်အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့် T2 မှာသက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုများ၏ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်ခွ) ဆိုလိုသည်မှာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ panel က data တွေကိုသုံးပြီး Cross-ကြံ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ (Cross-စပ်လျဉ်းမြင်သာထင်သာဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ရန် Finkel ခဲ့သည် 1995) ။ T1 နှင့် T2 မှာ T1 နှင့် T2 မှာအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အကြား CIU အကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ခွန်အားအချိန်ကျော်ကဤသဘောတရားများ၏တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်ကိုပေး၏။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသိသိသာသာ Cross-ဆက်ဆံရေးအများစုနေထိုင်ပြီးတစ်ဦးအရိပ်အယောင်ကိုပေး၏။ T1 မှာ CIU မှ T2 မှာအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်ကနေလမ်းကြောင်းကိုသိသိသာသာကြီးလျှင်, ဥပမာ, T1 မှာအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်မှ T2 မှာ CIU ကနေလမ်းကြောင်းကို Non-သိသာကြီးသော်လည်း, ကနှစ်ခုခြား၏ဆိုလိုပေသည် လမ်းခရီး CIU မှအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်ကနေစပ်လျဉ်းမြင်သာထင်သာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Cross-ကြံ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုအဖြစ် T1 မှာကျားမ, အသက်နှင့်ကျောင်းအဆင့်နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးနီးပါး (လေ့လာမှု ၁: ၉၉.၅%၊ လေ့လာမှု ၂ - ၁၀၀%) သည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အိမ်၌အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် (လေ့လာမှု ၁ - ၉၆.၆%; လေ့လာမှု ၂ - ၉၉.၀%) ။ လေ့လာမှု ၁ တွင်နမူနာ၏ထက်ဝက်ထက်နည်းသော (၄၃%) သည်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ ၂၅.၁% သည်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်သို့မဟုတ် ၆ ရက်၊ ၂၃.၆% ၂ ရက်မှ ၄ ရက်နှင့် ၁.၃ ၈.၃% ၁ ။ တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း လေ့လာမှု ၂ တွင်ပါ ၀ င်သူအများစုသည်အင်တာနက်ကိုတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက် (၆၄%)၊ ၂၄% သည်အင်တာနက်ကို ၅ ရက်သို့မဟုတ် ၆ ရက်၊ ၁၂ ၁၂ ၄ ရက်တစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောအင်တာနက်လုပ်ဆောင်ချက်သည်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်း၊ တေးဂီတ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှု ၁ တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုတစ်ပတ်လျှင် ၁၁ ဟက်တာခန့်အသုံးပြုကြကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် = 11,68), လေ့လာမှု2မှာဒီ 14.8 ဟက်တာရက်သတ္တပတ် (SD ကို) ဖြစ်ခဲ့သည် = T.11.16 နှင့် 1 ဟက်တာရက်သတ္တပတ် (SD က) အပေါ် 14.3) = T10.58 အပေါ် 2) ။ လေ့လာမှု 1 အတွက် CIU ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဆင့်ကို 1.82 (အကွာအဝေး 3.79) ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု2အတွင်းမှာပဲ CIU ၏ယုတ်အဆင့် T2.11 အပေါ် T3.75 နှင့် 1 အပေါ် 2.00 (အကွာအဝေး 4.00) (အကွာအဝေး 2) ဖြစ်ခဲ့သည်။ Meerkerk (နေဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုခွဲခြားဖို့အသုံးပြုတဲ့စံ၏အခြေခံတွင်2007), compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့လေ့လာမှု 4.2 အတွက်အသီးသီး 1 T8 နှင့် T6.5 မှာလေ့လာ 1 အတွက်% နှင့် 2% နှင့် 2% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ, compulsive အသုံးပြုမှုလက္ခဏာတွေလေ့လာမှု2၏နမူနာပိုမိုပျံ့နှံ့နေသည်မထွက်ရ, အရှင်, အ CIUS အပေါ်ရမှတ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးများအတွက်အကောင့်များနှင့်လည်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုပြဿနာအဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်။
အင်တာနက်တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်စပ်မှု
အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်စပ်မှုဇယားမှာပြနေကြသည် 1။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအင်တာနက်အကြောင်းကိုမိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးနှင့် CIU အကြားအနုတ်လက္ခဏာ Cross-Section နှင့် longitudinal ဆက်ဆံရေးပြနှင့်အချိန်အကြောင်းကိုမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့် Cross-Section နှင့် longitudinal ဆက်စပ်မှုအင်တာနက်နှင့် CIU အပေါ်ခဲ့ရသည်။ သာ Cross-Section (သို့သော်မပေး longitudinal) ဆက်စပ်မှုအပျက်သဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့ဖေါ်ပြခြင်း, အင်တာနက်အကြောင်းအရာနှင့် CIU အကြောင်းကိုမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့လာမှု 1 (သို့သော်2လေ့လာမဟုတ်) အတွင်းကျနော်တို့အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် CIU မှမိဘတုံ့ပြန်မှုများအကြားတစ်ဦးကအနုတ် Cross-Section ဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မော်ဒယ် Variables ကို, လေ့လာ 1 နှင့်2အကြားဆက်စပ်မှု
cross-section နှင့် longitudinal အင်တာနက်ကိုမိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်ဆံရေး: SEM ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်ဆံရေး, လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားစဉ်ထပ်မံ SEM လေ့လာဆန်းစစ်ပို့ချခြင်းဖြင့်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှု 1 များအတွက် Cross-Section မော်ဒယ်များအသီးသီး 22.4% နှင့် 2% ကရှင်းပြသည်သော်လည်းလေ့လာ 19.3 များအတွက် Cross-Section မော်ဒယ် CIU အတွက်ကှဲလှဲ၏ 28.9% ကရှင်းပြသည်။ လေ့လာမှု 1 များအတွက်မော်ဒယ်၏အဆိုအရလေးမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့် CIU နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆန့်ကျင်, အင်တာနက်သုံးစွဲအချိန်အကြောင်းကိုမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြုသဘော CIU နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်, ထိုထက်ပိုသောမိဘများ CIU များ၏အန္တရာယ်မြင့်မား, အွန်လိုင်းအချိန်နှင့် ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြဌာန်းကြောင်းညွှန်ပြ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီ, အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှမိဘတုံ့ပြန်မှု, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြောင်းအရာနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို CIU အဆိုးဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်၎င်းတို့၏မိဘများကသူတို့မိဘများကသူတို့ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ content တွေအကြောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြဋ္ဌာန်းရန်ကြောင်း, သူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတုံ့ပြန်မယ်လို့, သူတို့သည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူစကားစမြည်ကျေနပ်ဖူးကြောင်းအစီရင်ခံတဲ့အခါသူတို့ CIU တစ်နိမ့်အန္တရာယ်မှာရှိကြ၏။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်း CIU မှသိသိသာသာဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ လေ့လာမှု2၏ Cross-Section မော်ဒယ်များလေ့လာမှု 1 (ဇယားတှငျတှေ့သူတို့အားအလားတူအသင်းအဖွဲ့များပြသ 2).
အင်တာနက်တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်ဆံရေး (စံသော Gamma အလေးချိန်)
တစ်ထိန်းချုပ်မှု variable ကိုအဖြစ် CIU T2 အပါအဝင်မဟုတ်လေ့လာမှု 1 ၏ longitudinal မော်ဒယ်မျှစပ်လျဉ်းအကြောင်းအရာနှင့် CIU အကြောင်းကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြားတွေ့သော မှလွဲ. လေ့လာမှု2၏ Cross-Section မော်ဒယ်များဆင်တူအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ထိန်းချုပ်မှု variable ကိုအဖြစ် T2 မှာ CIU အပါအဝင်လေ့လာ 1 ၏ longitudinal မော်ဒယ်တော့ဘူးဆိုသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့များမပြခဲ့ပါဘူး။
စားပွဲတင်အတွက်တင်ပြအဖြစ် 3, SEM (လေ့လာမှု 1 အားနည်းပြပွဲသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုအသက်အရွယ်အကြားမျှအသင်းအဖွဲ့များအဘို့ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးβ = 0.05), ကျား, မ (ns။ ) နှင့်ပညာရေးအဆင့်ကို (β = -0.06) နှင့် CIU ။ လေ့လာမှု2၏နှစ်ခု Cross-Section မော်ဒယ်များသို့သော်တစ်ဦးအနိမ့်ပညာရေး Level ဖြင့်ငယ်ရွယ်သောမြီးကောင်ပေါက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် CIU ပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်, အသက်နှင့်ကျောင်းအဆင့်နှင့် CIU ၏ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုအကြားအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတွေအားလုံးအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အပေါ်ယောက်ျားလေးများထက်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူမထွက်ရအပြင်, ရှိသမျှမော်ဒယ် (လေ့လာမှု2ဆက်သွယ်ရေး၏ကျားမနှင့်အရည်အသွေးအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်), ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုနှင့်အင်တာနက်-related မိဘအုပ်ထိန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များပြငယ်ရွယ်သောဖြေဆိုသူလေးအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ အဟောင်းတွေဖြေဆိုသူ (အဘယ်သူမျှမ link ကိုဆက်သွယ်ရေး၏အသက်အရွယ်နှင့်အရည်အသွေးအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်) နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပညာရေးအဆင့်ကိုပိုပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အတူဖြေဆိုသူထက်ငါးအင်တာနက်-related မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်၏အင်တာနက်သုံးစွဲအချိန်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုမိဘတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦး အင်တာနက် (သာလေ့လာ 1) နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (သာလေ့လာ 2) အကြောင်းကိုဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးမြင့်မား။
သင်တန်းသားများ '' လူဦးရေအချိုးအစားလက်ခဏာ, အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU (စံသော Gamma အလေးချိန်) အကြားဆက်ဆံရေး
အင်တာနက်တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားတွင်အသင်း၏ Bidirectionality
အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အနာဂတ် CIU ဟောကိန်းထုတ်, ဒါမှမဟုတ် CIU အနာဂတ်အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်ဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်စေ, ငါး Cross-ကြံ့ panel ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ငါးအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်တွေထဲကအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ အသက်အရွယ်, ကျားမနှင့်ကျောင်းအဆင့်ကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့လေးပါးမော်ဒယ် variable တွေကိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်ပုံထဲမှာပေးအပ်ထားတယ်။ 2။ ငါးမော်ဒယ်များ၏မထိုက်မတန်အစီအမံ CFI နှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ကြသည် > 0.95 နှင့် RMSEA < 0.05 ။ နှစ်ဦးကိုမော်ဒယ်များသိသိသာသာ Cross-ကြံ့လမ်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုအကြောင်းကိုဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးအပါအဝင်မော်ဒယ် (T1 မှာ T2 မှာဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးကနေ CIU မှသိသိသာသာလမ်းကြောင်းပြသβ = -0.10) ။ ထိုသို့သောလမ်းကြောင်း T1 မှာဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေး T2 မှာ CIU ကနေပြမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးအနာဂတ် CIU ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုလျော့ကျကြောင်းဆိုလို။ ဒုတိယအချက်မှာသိသိသာသာ Cross-ကြံ့လမ်းကြောင်း (T1 မှာဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းမှ T2 မှာ CIU ကနေရှာတွေ့ခဲ့သည်β = -0.13) ။ ထိုသို့သောလမ်းကြောင်း T1 မှာ T2 မှာဆက်သွယ်ရေး၏ကြိမ်နှုန်းကနေ CIU ပြမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤရလဒ်သည်မြီးကောင်ပေါက်အကြား CIU အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်ရေး၏မိဘများ '' ကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းစေကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဲဒီနှစျခုမော်ဒယ်များ၏မထိုက်မတန်အစီအမံကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စားပွဲတင်၏ longitudinal မော်ဒယ်များအစီရင်ခံအဖြစ်သူတို့တူညီသက်ရောက်မှုပြသနေသောကြောင့်ကျား, မ, အသက်နှင့်ကျောင်းအဆင့်၏ variable တွေကိုများအတွက်ရလဒ်များကိုဤနေရာတွင်တင်ပြကြသည်မဟုတ် 3.
အင်တာနက်တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်ဆံရေး: လက်ဝါးကပ်တိုင်လေ့လာမှု2၏ဒေတာများပေါ်တွင် အခြေခံ. & Models ကြံ့
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုလက်ရှိလေ့လာမှုများမိဘများ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (CIU) ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကာကွယ်တားဆီးဖို့ကစားနိုင်ပါတယ်အခန်းကဏ္ဍသို့ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ အင်တာနက်တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြား CIU တားဆီးကိုကူညီလိမ့်မည်။ ပိုများသောအထူးသ, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေး CIU ကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိရောက်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်အချို့သက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ အားလုံး Cross-Section SEM မော်ဒယ်များနှင့်သုံး longitudinal SEM မော်ဒယ်များနှစ်ခုသက်သာခံစားရသူကိုလူငယ်, နားလည်သဘောပေါက်သောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့နှင့်၎င်းတို့၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုမှုများကာလအတွင်း၎င်းတို့၏မိဘများကအလေးအနက်ထား CIU ဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့အနိမ့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့်မိဘ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပစ်မှတ်အပြုအမူ (Otten et al ၏အရည်အသွေးများအကြားအပြုသဘောတစ်ပြိုင်တည်းပါနှင့် longitudinal အသင်းအဖွဲ့များဖေါ်ပြခြင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ 2007b; Spijkerman et al ။ 2008) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုအဘတို့ကဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးသော်လည်းမိခင်အားဖြင့်ဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးအဆိုး, ဆယ်ကျော်သက် '' အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သ (ဗန်တွင်း Eijnden et al မဟုတ်ခဲ့ပေ။ 2009) နှင့်ဒုတိယလေ့လာမှုမိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးမြီးကောင်ပေါက် '' ဆေးလိပ်မသောက်သိမြင် precedes နှင့်ဖြင့်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်း (Otten et al ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ 2007b) ။ အဆိုပါစာရေးဆရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးအပေါ်အခြေခံပြီးဆက်သွယ်ရေးပုံစံများမြီးကောင်ပေါက် '' ဥစ္စာအသုံးပြုမှုတားဆီးကူညီကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောမိဘကလေးပူးတွဲမှု (Armsden နှင့် Greenburg ၏အရည်အသွေးအဖြစ်ယေဘုယျမိသားစုဆက်ဆံရေးများအကြားအသင်းအဖွဲ့များထံမှဖြစ်ပေါ် - ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးနှင့် CIU အကြားတစ်ဦးကအနုတ်အသင်းအဖွဲ့တချို့သက်သေအထောက်အထားပေးပေမယ့်, တဦးတည်းကဒီအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့-မှာစခွေငျးငှါအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်စေခြင်းငှါ 1987) နှင့် CIU ။ သို့သော်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ မိဘ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထွေထွေမိဘအုပ်ထိန်းအတိုင်းအတာတဦး၏အရည်အသွေးများအကြားဆက်ဆံရေး, ဆိုလိုသည်မှာမိဘထောက်ခံမှုရှိခဲ့ပေမယ့်လည်းဆက်သွယ်ရေး၏မိဘထောက်ခံမှုနှင့်အရည်အသွေးအကြားဒီကြားဆက်စပ်မှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားစဉ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ဆေးလိပ်မသောက်ဘယ်နေရာတွေမှာ၏အရည်အသွေးများအကြားအနှုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးမျိုး (ကနျြရ de Leeuw et al ။ 2009) ။ ပို. အရေးကြီးသည်, အသက် 4,870 မြီးကောင်ပေါက်အကြားကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့က cross-section လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို 11-16 ဒီယူဆချက် (ဗန် Rooij နှင့်ဗန်တွင်း Eijnden ဖြစ်စေပံ့ပိုးကူညီကြဘူး 2007) ။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌ဤဒေတာခဲ (ဆိုလိုသည်မှာမိဘကလေးပူးတွဲမှု, ထောက်ခံမှု, အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်၏အရည်အသွေး) နှင့် CIU ယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အကြားမည်သည့်အသင်းအဖွဲ့များကိုပြ။ ဒုတိယအဤအချက်အလက်များကိုသာယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် Internet-related မိဘအုပ်ထိန်းအကြားအနိမ့်-to-အလယ်အလတ်အသင်းအဖွဲ့များဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖျန်ဖြေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း ( cf. Baron နှင့် Kenny 1986) Internet-related မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်ယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ထို့ကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးထူးခြားယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကျော်နှင့်အထက် CIU ခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။
မိဘဆက်သွယ်ရေး၏အရည်အသွေးများ၏သက်ရောက်မှုအများဆုံးမှတ်သားဖွယ်ပုံပေါ်ပေမယ့်အခြားမိဘအလေ့အကျင့်လည်းမြီးကောင်ပေါက် '' CIU ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံရသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်-section မော်ဒယ်များအတွင်းစမ်းသပ်ပြီး, နှစ်ဦးစလုံးအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိဘ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှမိဘတုံ့ပြန်မှုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ content နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မိဘ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှမိဘတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ချဖို့ကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, CIU နှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့များပြသလိုက်တဲ့အခါ မြီးကောင်ပေါက်အကြား CIU ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကို။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်မိဘအုပ်ထိန်းမှုအပြုအမူအပေါ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ CIU ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရလဒ်များရရှိခဲ့သည်။ ကူးလူးဖြတ်လာသောစစ်ဆေးမှုများသည် CIU မှ T1 မှသိသိသာသာဆိုးသောလမ်းကြောင်းကိုပြသခဲ့ပြီး T2 ရှိမိဘဆက်သွယ်မှုအကြိမ်ရေသို့ပြတ်တောက်သွားသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည် ၆ လအကြာတွင်သူတို့၏မိဘများနှင့်အင်တာနက်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်မိဘများသည်ခဏတာပြီးနောက်အကြောင်းအရာနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် ၄ င်းတို့၏ကလေးများအားမလှုပ်ရှားစေလိုသောစိတ်များအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်နိုင်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကကလေး၏အင်တာနက်အလေ့အထနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏဆက်သွယ်ခြင်းသည်မိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အထဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောအတွေးကိုထောက်ခံခြင်းမရှိသောကြောင့်ပင်မိဘများသည်ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်နိုင်ပါသည်။
မမျှော်လင့်ဘဲ, အချိန်အကြောင်းကိုမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအွန်လိုင်းသုံးစွဲကြောင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပြပွဲ၏ Cross-Section data တွေကိုအပြုသဘောအချိန်အကြောင်းကိုပိုမိုနှင့်တင်းကျပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို CIU ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, CIU နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်မြီးကောင်ပေါက်အကြား CIU မိဘများအကြားအွန်လိုင်းအချိန်နှင့် ပတ်သက်. တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းလှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါဖြစ်လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာ Cross-ကြံ့ panel ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှစ်ခု directional လမ်းကြောင်းများထဲမှဖြစ်စေဘို့ထောက်ခံမှုလိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, က CIU အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မိဘအုပ်ချုပ်မှုကိုဘက်တော်သားမြီးကောင်ပေါက်ရဲ့အစောပိုငျးအရက်သောက်အပြုအမူ (Spijkerman et တားဆီးကူညီပေးသည်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, အရက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်း၏လယ်ပြင်ထဲမှာတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ခြားနားမိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့် Cross-Section အသင်းအဖွဲ့နှင့်သတိပြုသင့်ပါတယ် အယ်လ်။ 2008; ဗန် der Vorst et al ။ 2005; ဗန် Zundert et al ။ 2006).
အချိန်နှင့် CIU နှင့် ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့လည်းသုံး SEM မော်ဒယ်များမိဘတုံ့ပြန်မှုများနှင့် CIU အကြားပြသသိသာအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့များလုပ်ခဲ့တယ်စဉ်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာ bivariate ဆက်စပ်မှု, မိဘအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှတုံ့ပြန်မှုများနှင့် CIU အကြားတွေ့သောတွေ့ရှိချက်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ အချိန်နှင့် ပတ်သက်. မိဘအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စည်းမျဉ်းများအကြားမြင့်အပြုသဘောအချင်းချင်းဆက်စပ်မှုအွန်လိုင်းမိဘတုံ့ပြန်မှုများနှင့် CIU အကြား bivariate ဆက်စပ်မှုဖိနှိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဆိုပါကအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှမိဘတုံ့ပြန်မှု CIU ကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိရောက်တဲ့ tool ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအမှု၌မိဘတုံ့ပြန်မှုတင်းကျပ်သောအချိန်ကန့်သတ်ချိန်ညှိထားရှိရေးမကောက်ချက်ချရပါမည်။ အနာဂတ်သုတေသနသို့သော် CIU တားဆီးအတွက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမှမိဘတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်၏အခန်းကဏ္ဍကိုပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ကောက်ချက်ဆွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေ၏အားသာချက်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအခြို့သောကန့်သတ်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာတည်ဆဲတိုင်းတာခြင်းတူရိယာ၏မရှိခြင်းအတွက်ကျနော်တို့အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်တိုင်းတာရန်အသစ်ငါးခုအကြေးခွံများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယခင်တွေ့ရှိချက်များကဤအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအကြေးခွံယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းများ၏မကြာခဏအသုံးပြုအတိုင်းအတာအားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိမဟုတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာ (ဗန် Rooij နှင့်ဗန်တွင်း Eijnden တိုင်းတာကြောင်းညွှန်ပြပေမယ့် 2007) ဤအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအစီအမံသုံးပြီးသုတေသနပြုသည်ဤအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအကြေးခွံများတရားဝင်မှု၏တစ်ဦးထက်ပိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်လေ့လာအကဲဖြတ်နေအကြိုးခံစားရလိမ့်မယ်။
ထို့ပြင်လက်ရှိဒေတာမြီးကောင်ပေါက် '' Self-အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်များနှင့်မိဘများအနေဖြင့်အစီရင်ခံစာများမပါဝင်ခဲ့ချေ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်မိဘများ 'နှင့်မြီးကောင်ပေါက်' 'အစီရင်ခံစာများအကြားကွာခြားချက်များ (အိန်ဂျယ် et al ဖော်ပြသည်။ 2007), နှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်ပြဿနာများ (ဖာဒီနန် et al ။ 2004; Vierhaus နှင့် Lohaus 2008) ။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများထပ်မံမိဘနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကျား, မ (Vierhaus နှင့် Lohaus '' Self-အစီရင်ခံစာများ မူတည်. ပစ်မှတ်အပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းအတွက်ဥပမာ, ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့အပြုအမူအမျိုးအစားပေါ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကွာခြား '' ကွောငျးတငျပွ 2008) ။ ဒါဟာအစကသူတို့သားသမီးရဲ့အရက်အသုံးပြုမှုလျှော့တွက်တဲ့သူမိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဘယ်မှာအကြောင်းကိုဒီထက်သိတယ်နဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (အိန်ဂျယ် et al လျှော့မတွက်ခဲ့ပါဘူးသူကိုမိဘများထက်လျော့နည်းမိဘထိန်းချုပ်မှုပြဌာန်းကြောင်းပြသနေသည်။ 2007) ။ ဒါကွောငျ့မိဘကလေးအစီရင်ခံစာများတွင်ကှာဟအန္တရာယ်များဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းမိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်များအလငျး၌, ငါတို့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်မြီးကောင်ပေါက် '' သူတို့ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်အလေ့အထများနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားအမြင် '' ဤအအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မိဘသဘောထားအမြင်ကှာခွားစခွေငျးငှါစိတ်တွင်ကိုထမ်းသငျ့သညျ။ အနာဂတ်သုတေသနနောက်ထပ်မြီးကောင်ပေါက်အဖြစ်၎င်းတို့၏မိဘများအနေဖြင့်ဒေတာများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာကိုဆနျးစစျသငျ့သညျ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ longitudinal လေ့လာမှု၏အချိန်နောက်ကျ6လခဲ့ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏ CIU အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှာရန်ဤအချိန်သည်ရှည်လျားသောကာလဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆယ်ကျော်သက်များသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ဖြုန်းနေပါကမိဘများသည်သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများနှင့်ဤအကြောင်းကိုစတင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ သို့သော်မိဘများအနေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုစတင်ပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၆ လတာကာလအတွင်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မှုအကြိမ်ရေသည်တစ်ဖန်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောရေတိုသက်ရောက်မှုပစ္စုပ္ပန် longitudinal ဒီဇိုင်းနှင့်အတူသရုပ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ကိုတိကျသောမိဘအုပ်ထိန်းမှု၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတကိုပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အနာဂတ်သုတေသနသည်အနည်းဆုံးရေတိုရေတိုနောက်ဆက်တွဲတိုင်းတာမှုသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်အသုံးပြုသောမိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အကျင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ တစ် ဦး ချင်းစီလမ်းကြောင်းများကိုပုံစံပြုပါကအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ။
နောက်ထပ်န့်အသတ်လေ့လာမှု2၏ပထမနှင့်ဒုတိယတိုင်းတာများအကြားအမြင့်ဆုံး Drop-ထွက်နှုန်းကို၎င်း, attrition ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒုတိယတိုင်းတာခြင်းမှာ Over-ကိုယ်စားပြုမှုပိုမိုမြင့်မားပညာတတ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပြသသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာမှု 1 ၏ရလဒ်များကို CIU နိမ့်ပညာတတ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားကိုပိုပြီးပျံ့နှံ့ကြောင်းအကြံပြုကတည်းက Cross-ကြံ့များ၏တွေ့ရှိချက်များ generalizing အထွေထွေဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလူဦးရေမှလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအချို့သတိထားမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့လာမှု ၂ ၏အချက်အလက်များသည်အင်တာနက်မှတဆင့်စုဆောင်းထားသည့်ရွေးချယ်ထားသောနမူနာများအပေါ်အခြေခံထားကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည်။ အထူးသဖြင့် MSN messenger မှတစ်ဆင့်။ ရလဒ်အနေဖြင့် MSN messenger ကိုအသုံးမပြုသောလူငယ်များသည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပြီး ၄ င်း၏ပြင်ပတရားဝင်မှုကိုလည်းကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည်မှာမကြာသေးမီကအချက်အလက်များအရ ၁၁-၁၅ နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် MSN messenger ကို ၇ ပတ်မှ ၈ ဟက်တာလျှင်တစ်ပတ်ပျမ်းမျှအသုံးပြုကြသည် (Van Rooij နှင့် Van den Eijnden) 2007) ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၆ ပတ်ကြာကာလအတွင်းနဖူးစည်းစာတန်းများကိုတစ်ကြိမ်သာပေးသောကြောင့် MSN messenger အသုံးပြုသူများနှင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များ၏ပြင်ပတရားဝင်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုမရှိဟုယူဆသည်။ ဤအယူအဆကိုလေ့လာမှု (၂) တွင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုသည်လေ့လာမှု (၁) နှင့်အလားတူအသက်တူအုပ်စုရှိဒတ်ခ်ျအလယ်တန်းကျောင်းမှကလေးများအကြားလေ့လာမှုနှင့်ဆင်တူသည်ကိုတွေ့ရှိမှုမှထပ်မံထောက်ခံသည်။
ပေါင်းလဒ်မှာတော့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သှေးကောငျးမှဆက်သွယ်ရေးမိဘများ CIU တစ်ပုံစံဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကာကွယ်တားဆီးဖို့အတှကျအလားအလာအကောင်းဆုံး tool ကိုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ခွန်အားကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်နှင့် bidirectional လမ်းကြောင်းဆနျးစစျဖို့အဆင့်မြင့်စာရင်းဇယားသုံးပြီးသေးငယ်နမူနာ၏ longitudinal အချက်အလက်များ၏ကြီးမားသော, ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများ၏ Cross-Section အချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြားဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်စာရေးဆရာများပြီးသားမိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူများနှင့်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (Lee နဲ့ Chae အကြားတစ်ဦး link ကိုအကြံပြု 2007; ဝမ် et al ။ 2005; ယန်း et al ။ 2007) ။ သို့သော်ဤအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် CIU အကြား longitudinal ဆက်ဆံရေးစမ်းသပ်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနောက်ထပ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များအများအပြားပုံစံများများ၏သက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံ CIU ၏ဆုံးအဖွတျအပေါ်လက်ရှိအသိပညာကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အပေါ်ပင်ကိုယ်မူလထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအင်တာနက်-တိကျတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးလေ့လာနေဘို့ပိုပြီးပြည့်စုံမူဘောင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ။
ပွင့်လင်း Access ကို ဤဆောင်းပါးသည်, မဆိုရယူထားရတာအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုရသောကို Creative Commons Attribution ရယူထားရတာလိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေဖြန့်ချိခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးဆရာ (s) ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်ဘဏ်စာရင်းထဲသွင်းနေကြသည်။ နေသည်
1မကြာသေးခင်က Cross-Section လေ့လာမှု (ဗန် Rooij နှင့်ဗန်တွင်း Eijnden အတွက် 2007), ကျနော်တို့ကမှီခို variable ကိုအဖြစ်အင်တာနက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ '' အွန်လိုင်းသုံးစွဲအပတ်စဉ်အချိန် '' အဘို့အဆင်တူရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် CIU သည်။ ရလဒ် CIU မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, 'အွန်လိုင်းသုံးစွဲအပတ်စဉ်အချိန်' 'အဘို့အနည်းပါးလာခြင်းနှင့်အားနည်း Cross-Section အသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်။
ယား။ (1995) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူနာကုသမှုများအတွက်အလေ့အကျင့်လမ်းညွှန်ချက်များ: အရက်, ကင်း, opiates ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 152(ပျော့ပျောင်း) ။
Armsden GC, Greenburg MT ။ မိဘများ၏စာရင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူပူးတွဲဖိုင်ကို: တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာဖို့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 1987;16(5):427–454. doi: 10.1007/BF02202939. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baron RM, Kenny DA ။ လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်က Moderator-ဖျန်ဖြေ variable ကိုဂုဏ်ထူး: အယူအဆရေးရာမဟာဗျူဟာနှင့်စာရင်းအင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1986;51:1173–1182. doi: 10.1037/0022-3514.51.6.1173. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Byrne BM ။ LISREL, PRELIS နှင့်ရိုးရိုးနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: အခြေခံပညာသဘောတရားများ, application များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း။ Mahwah: Erlbaum; 1998 ။
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003;160(6):1041–1052. doi: 10.1176/appi.ajp.160.6.1041. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကာဇီ BJ, ဂျုံးစ် RM, Hare က TA ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2008;1124: 111-126 ။ Doi: 10.1196 / annals.1440.010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cooper ကအေလိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 1998;1(2):187–193. doi: 10.1089/cpb.1998.1.187. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Leeuw RNH, Scholte RHJ, Harakeh Z ကို, Leeuwe JFJ, အိန်ဂျယ် RCME ။ မိဘဆေးလိပ်သောက်-တိကျတဲ့ဆက်သွယ်ရေး, ဆယ်ကျော်သက် '' ဆေးလိပ်မသောက်အပြုအမူများနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရွေးချယ်ရေး။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2008;37(10):1229–1241. doi: 10.1007/s10964-008-9273-z. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
De Leeuw, RN, Scholte, RH, Vermulst, AA, & Engels, RCME (2009) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းတို့၏ဆက်စပ်မှု - မိဘပြောင်းလဲခြင်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
အိန်ဂျယ် RCME, Vorst H ကို, Dekovic M က, Meeus ဒဗလျူပေးစာယူပေါင်ပစ္စည်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုအပေါ် Self-အစီရင်ခံစာများတွင်: မိသားစုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွင်း။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2007;32(5):1016–1030. doi: 10.1016/j.addbeh.2006.07.006. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ennett ST, Bauman Ke, Pemberton က M, Foshee VA သို့, Chuang YC ဘုရင် TS, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့တစ်မိသားစု-ညွှန်ကြားအစီအစဉ်တွင်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ။ 2001;33(4):333–346. doi: 10.1006/pmed.2001.0892. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖာဒီနန် RF, Ende J ကို, Verhulst FC အသင်း။ ဆိုးရွားသောရလဒ်များအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ယေဘုယျလူဦးရေကနေဆယ်ကျော်သက်အတွက် psychopathology နှင့် ပတ်သက်. မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသဘောမတူ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2004;113(2):198–206. doi: 10.1037/0021-843X.113.2.198. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Finkel SE ။ panel ကိုဒေတာတွေနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Vol ။ 105) တထောင်သပိတ်: SAGE; 1995 ။
et al Glasgow KL, Dornbusch သည် SM, Troyer L ကို, Steinberg L ကို။ မိဘအုပ်ထိန်းမှုစတိုင်များ, ဆယ်ကျော်သက် '' အရည်အသွေးများနှင့်ကိုးပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအထက်တန်းကျောင်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာရလဒ်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1997;68(3):507–529. doi: 10.2307/1131675. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Greenfield DN ။ compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ: တစ်ပဏာမဆန်းစစ်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 1999;2(5):403–412. doi: 10.1089/cpb.1999.2.403. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Greenfield pm တွင်။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်သင့်လျော်သောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလမ်းညွှန်ချက်များအဆုံးအဖြတ်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အသုံးချ Developmental စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2004;25(6):751–762. doi: 10.1016/j.appdev.2004.09.008. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စုစုပေါင်း EF ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: ငါတို့သည်မျှော်လင့်ထားသောအရာကိုအဘယ်သို့ဆယ်ကျော်သက်သတင်းပို့ပါ။ အသုံးချ Developmental စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2004;25(6):633–649. doi: 10.1016/j.appdev.2004.09.005. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Harakeh Z ကို, Scholte RH အ, Vermulst AA ကို, Vries H ကို, အိန်ဂျယ် RCME ။ မိဘအချက်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ဆေးလိပ်မသောက်အပြုအမူ: စီစဉ်ထားအပြုအမူများ၏သီအိုရီတစ်ခု extension ကို။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ။ 2004;39(5):951–961. doi: 10.1016/j.ypmed.2004.03.036. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Harakeh Z ကို, Scholte RH အ, Vries H ကို, အိန်ဂျယ် RCME ။ မိဘစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေး: ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့။ စွဲလမ်း။ 2005;100(6):862–870. doi: 10.1111/j.1360-0443.2005.01067.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Huver RME, အိန်ဂျယ် RCME, Vermulst AA ကို, DeVries အိပ်ချ်ဆေးလိပ်သောက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်တစ်ခုအခြေအနေတွင်မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်လား? မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2007;89: 116-125 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2006.12.005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျက်ဆင်ကို C, Henriksen L ကို, Dickinson ဃအရက်-တိကျတဲ့လူမှုရေး, မိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူတွေနှင့်ကလေးများအားဖြင့်အရက်အသုံးပြုခြင်း။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1999;60(3): 362-367 ။ [PubMed]
Johansson A, Gotestam KG ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - မေးခွန်းများနှင့်နော်ဝေလူငယ်များတွင်ပျံ့နှံ့မှု (၁၂ မှ ၁၈ နှစ်) စိတ်ပညာ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်။ 2004;45(3):223–229. doi: 10.1111/j.1467-9450.2004.00398.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kaltiala-Heino R၊ Lintonen T, Rimpela A. အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု။ 12-18 နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်လူ ဦး ရေအတွက်အင်တာနက်ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemနာ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ 2004;12(1):89–96. doi: 10.1080/1606635031000098796. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kaplan ဃ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အဆက်များ။ sage: တစ်ထောင်ပိတ်ပင်တို့, 2000 ။
Kerr က M, Stattin အိပ်ချ်သူတို့ကသိကြပုံကိုအဘယျသို့မိဘများသိနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ညှိနှိုင်းမှုအတော်ကြာပုံစံများ: စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏အဓိပ္ပာယ်များအတွက်ထပ်မံထောက်ခံကြောင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2000;36(3):366–380. doi: 10.1037/0012-1649.36.3.366. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kline RB ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်၏အခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်။ နယူးယောက်: Guilford; 1998 ။
ko CH, ယန်း JY, ယန်း CF, လင်း HC, ယန် MJ ။ ငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ဖြစ်ပွားမှုနှင့်လွှတ်ဘို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များ: တစ်အလားအလာလေ့လာမှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2007;10(4):545–551. doi: 10.1089/cpb.2007.9992. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lee က SJ, Chae YG ။ တစ်မိသားစုအခြေအနေတွင်ကလေးများသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု: မိသားစုဆက်ဆံရေးများနှင့်မိဘဖျန်ဖြေခြင်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2007;10(5):640–644. doi: 10.1089/cpb.2007.9975. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူ CY, Kuo ကဘဏ္ဍာရေးနှစ်။ အဆိုပါလူ့သီအိုရီ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်အင်တာနက်စွဲ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2007;10(6):799–804. doi: 10.1089/cpb.2007.9951. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Luthar အက်စ်အက်စ်, စတိန်း AS ။ ဆင်ခြေဖုံးနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အကြားဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ: ရိပ်မိမိဘများ၏အရေးပါမှုကို။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychopathology ။ 2008;20(2):591–614. doi: 10.1017/S0954579408000291. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နားမှာ HW, Balla JR, မက်ဒေါ်နယ် RP ။ ကောင်းမြတ်ခြင်း-of-မထိုက်မတန် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အညွှန်းကိန်း: နမူနာအရွယ်အစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1988;103(3):391–410. doi: 10.1037/0033-2909.103.3.391. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Meerkerk, GJ (2007) ။ အင်တာနက်အားဖြင့် Pwned: compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များသို့ Explorer သုတေသန။ ရိုတာဒမ်: IVO ။ စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း။ http://www.ivo.nl/?id=557.
Meerkerk GJ, Eijnden RJJM, Vermulst AA ကို, Garretsen အိပ်ချ်ဒီ compulsive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအတိုင်းအတာ (CIUS), တချို့က psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2009;12(1):1–6. doi: 10.1089/cpb.2008.0181. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mitchell က P. အင်တာနက်စွဲ: စစ်မှန်သောရောဂါသို့မဟုတ်မဟုတ်လော ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2000;355(9204):632. doi: 10.1016/S0140-6736(05)72500-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Muthén LK, Muthén bo ။ Mplus အသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန် (4th ed ။ ) လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ 1998 ။
Nichols LA ကတစ် psychometrically သံကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းစကေး၏ Nicki R. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: တစ်ပဏာမခြေလှမ်း။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 2004;18(4):381–384. doi: 10.1037/0893-164X.18.4.381. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အလွန်အကျွံစားချင်စိတ်အဖြစ် Orford ဂျေစွဲ။ စွဲလမ်း။ 2001;96(1):15–31. doi: 10.1046/j.1360-0443.2001.961152.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Otten R ကို, အိန်ဂျယ် RCME, Eijnden RJMM ။ နှင့်ပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်းမရှိဘဲမြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူဆေးလိပ်အတွက်မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကို။ နီကိုတင်းဆေးရွက်ကြီးသုတေသန။ 2007a;9(1):109–118. doi: 10.1080/14622200601078426. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Otten R ကို, Harakeh Z ကို, Vermulst AA ကို, Eijnden RJJM, အိန်ဂျယ် RCME ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်သိမြင်မှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်း၏ antecedents အဖြစ်မိဘဆက်သွယ်ရေး၏ frequency နှင့်အရည်အသွေး။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 2007b;21(1):1–12. doi: 10.1037/0893-164X.21.1.1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Scholte RHJ, Lieshout CFM, Aken MAG ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာရိပ်မိ relational ထောက်ခံမှု။ ရှုထောင့်, configurations နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ညှိနှိုင်းမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2003;11(1):71–94. doi: 10.1111/1532-7795.00004. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shapira NA, Lessig MC, ရွှေပန်းထိမ် TD, Szabo ST, Lazoritz M က, ရွှေစင်က MS, et al ။ ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: အဆိုပြုထားခွဲခြားခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေစံ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့တော့ပူပန်။ 2003;17(4):207–216. doi: 10.1002/da.10094. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sothern က MS ။ ကလေးများအတွက်အဝလွန်ခြင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေး: ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အာဟာရ။ အာဟာရ။ 2004;20(7–8):704–708. doi: 10.1016/j.nut.2004.04.007. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spijkerman R ကို, Eijnden RJJM, အရက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်အတွက် Huiberts အေလူမှုစီးပွားရေးကွဲပြားမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' အရက်သောက်ပုံစံများ။ ဥရောပစွဲသုတေသန။ 2008;14(1):26–37. doi: 10.1159/000110408. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Subrahmanyam K ကို Kraut RE, Greenfield pm တွင်, စုစုပေါင်း EF ။ သားသမီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အိမ်မှာကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု။ အနာဂတ်ကလေး။ 2000;10(2):123–144. doi: 10.2307/1602692. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eijnden RJJM, Meerkerk GJ, Vermulst AA ကို, Spijkerman R ကို, အိန်ဂျယ် RCME ။ အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး, compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ: တစ် longitudinal လေ့လာမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2008;44(3):655–665. doi: 10.1037/0012-1649.44.3.655. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန်ဒင် Eijnden, RJJM, Vet, R. , Vermulst, အေ, & ဗန်က de Mheen, D. (2009) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်နှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများအပေါ်အရက်တိကျသောမိဘအုပ်ထိန်းမှုအလေ့အထများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Submitted.
Vorst H ကို, အိန်ဂျယ် RCME, Meeus W က, Dekovic M က, Leeuwe ဂျေမြီးကောင်ပေါက် '' အရက်သောက်အပြုအမူအတွက်အရက်-တိကျတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ စွဲလမ်း။ 2005;100(10):1464–1476. doi: 10.1111/j.1360-0443.2005.01193.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vorst H ကို, အိန်ဂျယ် RCME, Meeus W က, Dekovic အမ်မိဘပူးတွဲမှု, မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ် longitudinal လေ့လာမှု။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 2006;20(2):107–116. doi: 10.1037/0893-164X.20.2.107. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rooij AJ, Eijnden RJJM ။ Jongeren 2006 en 2007 en အင်တာနက်ကိုစောင့်ကြည့်။ Ontwikkelingen အတွက် internetgebruik en က de rol ဗန် opvoeding [အင်တာနက်နှင့်လူငယ် 2006 နှင့် 2007: အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်မိဘအုပ်ထိန်း၏အခန်းကဏ္ဍကို] IVO အမှတ် 45, ရိုတာဒမ် Reeks: IVO; 2007 ။
Zundert RMP, Vorst H ကို, Vermulst AA ကို, အိန်ဂျယ် RCME ။ ပုံမှန်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပညာရေးအတွက်ဒတ်ခ်ျကျောင်းသားများအကြားအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းမှလမ်းကြောင်း: အမိဘအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍ, ယေဘုယျမိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်များနှင့်အရက်-တိကျတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2006;20(3):456–467. doi: 10.1037/0893-3200.20.3.456. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vierhaus M က, Lohaus အေကလေးများနှင့်မိဘများကအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်အပြုအမူခန့်မှန်းစိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြဿနာများ၏သတင်းပေးအဖြစ်: တစ်ဦးက longitudinal Cross-သတင်းပေးလေ့လာမှု။ လူငယ် & မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဂျာနယ်။ 2008;37(2):211–224. doi: 10.1007/s10964-007-9193-3. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် R ကို, Bianchi သည် SM, Raley SB ။ ဆယ်ကျော်သက် '' အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိသားစုအုပ်စိုး: သုတေသနမှတ်စု။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 2005;67(5):1249–1258. doi: 10.1111/j.1741-3737.2005.00214.x. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယန်း JY, ယန်း CF, Chen က CC ကို, ချန် SH, Ko CH ။ ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံ၏မိသားစုအချက်များ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2007;10(3):323–329. doi: 10.1089/cpb.2006.9948. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူငယ်တို့ KS ။ အင်တာနက်စွဲ: အသစ်တစ်ခုကိုလက်တွေ့ရောဂါပေါ်ပေါက်ရေး။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ။ 1998;1(3):237–244. doi: 10.1089/cpb.1998.1.237. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူငယ်တို့ KS ။ အင်တာနက်စွဲ: အသစ်တစ်ခုကိုလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များ။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်။ 2004;48(4):402–415. doi: 10.1177/0002764204270278. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူငယ်တို့ KS, Pistner M က, O'Mara J ကို, Buchanan ဂျေဆိုက်ဘာမမှန်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်များအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ကြောင်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 1999;2(5):475–479. doi: 10.1089/cpb.1999.2.475. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]